စံပယ်ပန်း: ကျွန်တော်နှင့် Facebook ပေါ်မှ အလွဲများ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 3/27/2012 10:25:00 pm
Yan 3/28/2012 02:50:00 am
ဖတ်ပြီး ပြုံးမိသွားတယ် မစံပယ်.
လူလွဲနေမှာစိုးလို့ ဒီတစ်ခါတော့ ဆိုက်နာမည်လေးပါ ရေးပေးခဲ့တယ်.
ပုံမှန်တော့ ကျွန်တော်က Y. တစ်လုံးတည်းပဲ ရေးလေ့ရှိပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိုဖိုင်းကို ဖျောက်ထားတတ်ပါတယ်.း)
အောင်မြင်တဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ မစံပယ်.
ဒူဒူ 3/28/2012 02:16:00 pm
အင်ဂျင်နီယာတွေလွဲတတ်တာ သဘာဝဆိုလား..မလွဲရလျှင် မနေနိုင်သော မမစံပယ် ရေ။